Fitoriana Filazantsara: naverin’ny Graaf natonta ilay tantara an-kira “Takalo” | NewsMada
Fitoriana Filazantsara: naverin’ny Graaf natonta ilay tantara an-kira “Takalo”
Anisan’ny ezaka lehibe ataon’ny mpanakanto miangaly ny fitoriana Filazantsara ny hananana fivelarana bebe kokoa hatrany eo amin’ny sehatra izay misy azy. Iray amin’ireny ny Graaf.
Tanjon’ny Groupe artistique Akon’ny fanantenana (Graaf), avy amin’ny zanaka am-pielezan’ny fiangonana FJKM Ambodivato Fanantenana, ny hampipaka amin’ny olona tsirairay ny tenin’Andriamanitra ka hahatonga azy ireo tsy hisy ho diso anjara amin’ny famonjen’i Jesosy Kristy. Ankoatra ny hira, mampiavaka ny tarika ny fanaovana tantara an-kira na “comédie musicale”, heverin’izy ireo fa mora mahasarika kokoa ny mpijery sy mpihaino ka hahatafita ny hafatra.
“Takalo” ny lohatenin’ny tantara voalohany nataon’ny Graaf anaty rakitsary na DVD ary efa miparitaka amin’ny toerana maro. Noho ny fahabetsahan’ireo mbola mitady izany anefa, nanapa-kevitra ny tarika ka naverina natonta indray ity tantara an-kira ity. Marihina fa tsy fahita firy na tsy mbola nisy mihitsy aza, teto amintsika, ny “comédie musicale” natao rakitsary.
Amin’ny maha fitoriana ny Filazantsara ny antom-pisian’ny Graaf, miaina amin’ny foto-kevitra hita ao anatin’ny Baiboly ny tantara foronin’izy ireo. Narindra hifanaraka kokoa amin’ny zava-misy amin’izao fotoana izao kosa izany, hahatafita ny hafatra. Hira amin’ny gadona maro samihafa, malaza amin’izao andro izao, koa ny mandravaka ny tantara. Hira noforonin’ny tarika ny ankamaroany.
Tsy mijanona amin’ny fitoriana Filazantsara an-kira sy amin’ny tantara an-tsehatra ny Graaf fa manokana fotoana ihany koa ho an’ny asa sosialy. Araka ny fanazavan’ny mpikambana ao aminy, hiditra amin’ny fanomanana ny “comédie musicale” andiany faharoa izy ireo, atsy ho atsy.